TradeFred ari pose paIndaneti Forex uye CFD wokutengesera kuchikuva. nyanzvi yedu zvaainazvo zvemari uye mutengi rutsigiro unyanzvi chendangariro tinogona kupa iwe imwe mari ruzivo yakadekara nomumwe inivhesitimendi Style yako. Tinoedza kuramba nzvimbo yedu sezvo zita akavimba indasitiri, kuonga kwedu yetsika uye mutengi vaifarira kusvika.
Sei uchifanira kubatana TradeFred?
– First-kirasi wokutengesera ruzivo, kusanganisira yakamanikana Anopararira pamusoro chete 0.1 pips.
– Nyanzvi zvinhu zvakagadzirirwa kuzoumba yenyu Zvakanyanya Kunaka Panguva Yepamuviri zvokutengeserana nzira.
– Open itsva zvokutengeserana nzvimbo pasina kunovhiringidza dzevanhu manzwiro.
– Quick kuwana mari yako mune chete vanoshanda zuva mhiri vakawanda mubhadharo nzira.
– mukuru zvokutengeserana, yakavimbika kuti kugadzira uye nokutsanya Implementation.
– Unlimited Demo mari nhoroondo ine raibhurari rusununguko kudzidzisa zvinhu.
– Client midziyo inoitwa mabhanga vomuzana kirasi, zvachose mari yedu pachedu.
– Dedicated Account Manager uye mitauro zvikwata vatengi.
– Tanga vanotengesa Forex uye CFDs ane pasi kutanga inivhesitimendi chete $ 250.
New kuti Forex? Dzidza kuti kuchinjanisa somunhu aifarira uye kutanga kwako mari rwendo hakuna nguva zvachose.
Regai kuripa nezvinhu zvinodhura. Ponesai nguva uye mari idzi FREE Ezvemutauro kubva TradeFred Academy:
TradeFred kwaiita Products:
TradeFred chinotarisa wokutengesera Forex uye CFDs. Vakafukidza mumwe kupfuura zvakakwana siyana misika, kusvika 50 Currency maviri dziri FX chikamu chete.
The Kuurayiwa Forex zvokutengeserana ndizvo pachena kwazvo, uye apo nzvimbo inopa kwikwidzana chaizvo Anopararira, tinofanira vanoti TradeFreds Anopararira vari wakaiswa. Kufadza zvinogoneka zvireruke kuti Forex nomwe ndiro 1:50.
Muchengete Chikamu ane “naka kuurayiwa” aiwanzopiwa wokushanda pamwe Anopararira makuru uye yakafara musika nhau. The kunonyanyisa zvireruke ichi chigadzirwa chikamu chete 1:10.
The Indices chidimbu anofukidza misika kubva 6 makondinendi uye anopawo kwikwidzana Anopararira. The kunonyanyisa zvireruke zvakare zvishoma kudzika ari muchikwata ichi: Yakaiswa kuti 1:25.
simbi dzinokosha dzakadai goridhe, sirivha uye Platinum dzakakurumbira nguva dzose pamwe vatengesi. At TradeFred, vanokwanisa kuchinjanisa nesimbi zvakadaro Anopararira zvakanaka uye vaifanira zvireruke pamusoro 1:25.
Kufanana chero zvechokwadi uye mukurumbira brokerage, TradeFred anoshandisa MT4 sezvo centerpiece vayo pechikuva nechipiriso. The simba kupfuura pachikuva zvaipiwa TradeFred ndiye MT4 Desktop muzvinashawo, kunobva kuna wakakwana Suite pamusoro MT4 charting mhinduro uye michina ongororo Ezvemutauro.
Mifananidzo inogona uratidzwe pamwe anoyevedza siyana timeframes, inogona customized, uye girafu templates angaponeswa saka vatengesi vanogona shandisazve pavo papera. Kana hwokugadzira ongororo, pamusoro 50 zviratidzi vari kwerubwinyo rwakagara rwuripo yakaiswa pamwe papuratifomu. Ehe saizvozvo, vatengesi vanogona kusarudza yokugadza zvakatonyanya zviratidzi kuti vatenge kana kutenga mahara. Users kunogonawo kusika zviratidzo zvavo.
Mumwe MT4 kuti zvinokwaniswa iri Eas (nyanzvi Advisors) kuti vatengesi anogona kushandisa kuti otomatiki zvokutengeserana. Pamusoro pe, TradeFreds MT4 inoita kutengesa pakati Forex uye CFDs pamusoro chete chidzitiro uye rinewo nyanzvi mutengi kutarisirwa sezvo kuwana nyanzvi kumusika kuongorora uye nezvinhu dzidzo.
MT4 anogona kutorwa mahara kubva TradeFred Website.
TradeFred Account mhando:
TradeFred unopisira batsira Demo zvakatau- unobvumira vatengesi kutora kuchikuva uri mukana isina bvunzo kuruka. Nhoroondo The Demo zvinosanganisira $ 10,000 mune chaivo mari uye mashoko akawanda edzidzo. Nhoroondo inogona kushandiswa 14 mazuva, ipapo chete anofa.
The Basic Nhoroondo vangava chingaitwa beginners. Shoma dhipoziti kunodiwa nokuda iyi chete $ 260 uye kufadza zvireruke iri 1:50. Nhoroondo ane akazvitsaurira maneja uyewo bhizimisi zuva withdrawals.
Mureza Nhoroondo zvakare nyore vatengesi vakawanda, beginners mazhinji vanoshandisa. Shoma dhipoziti kunodiwa iri $ 500, uye kufadza zvireruke ndiyewo 1:50. The chete mamwe Muratidze Standard nhoroondo ane pamusoro Basic ndiye musika ongororo rinopa.
The kwenguva Nhoroondo kunoda mashoma dhipoziti pamusoro $ 1,000. The zvokutengeserana Mamiriro ezvinhu avo vataurwa pamusoro, asi nhoroondo rinewo zvokutengeserana anonongedzera kuti akaiswa zvakananga maserura pakati vatengesi.
With risingamboshandisi dhipoziti pamusoro $ 5,000, mutambo nokuti aifarira nhoroondo iri pasigasvikirwi vatengesi. Market kuongorora kunobatsira vatengi vanenge kuwira muchikwata ichi nhoroondo, uye Anopararira vari repasi vatengesi aifarira-nhoroondo.
Nhoroondo shoma uri pamusoro bhodhi: shoma dhipoziti iri $ 10,000. Nepo zvokutengeserana ezvinhu zvisinganyanyi kufanana pamusoro, nhoroondo iyi chaizvoizvo nyaya razero-swap.
TradeFred vanodada kushandisa zvenyika kutungamirira inivhesitimendi papuratifomu – MetaTrader 4. In Vhidhiyo iyi, isu ichatsanangura sei kushandisa pachikuva uye dzinokosha zvinhu dziripo.
Vaonekere Forex RAKO ZIVO WITH FREE anonongedzera *
Sei kubhadhara anonongedzera zvinodhura kana uchigona pavo FREE?
Regai kurasikirwa mukana wako. Join TradeFred vachitora
anonongedzera dzako uye kuvandudza unyanzvi hwako inivhesitimendi.
Blockchain News 28 Ndira 201...
BITCOIN $ 250k ne 2022? Plus Tr...